DataNumen SQL Recovery - ယခု Full Version ကိုဝယ်ပါ။
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen SQL Recovery ယခု Full Version ကိုဝယ်ပါ။
ယခု Full Version ကိုဝယ်ပါ။
ဘို့ စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုပါ၊ သင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုမှာထားရန်လိုပါသည်။
ကျနော်တို့ကိုသုံးပါ MyCommerce.com နှင့် FastSpring.com ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံခြုံသောဆာဗာများ။ ငါတို့လက်ခံတယ် အဓိကခရက်ဒစ်ကဒ်များအားလုံး၊ Maestro (ယူကေ)၊ giropay (ဂျာမနီ)၊ iDEAL (နယ်သာလန်)၊ ဘဏ် / ငွေလွှဲခြင်း၊ WebMoney၊ ၀ ယ်ရန်အမှာစာများ၊။ သက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုပုံစံကိုအော်ဒါမှာယူပါ။
အခြားမည်သည့် tools များပြန်လည်ကောင်းမွန်နိုင်လျှင် နောက်ထပ် ငါတို့ထက်ဒေတာ, ငါတို့လိမ့်မည် ပြန်ပေးခြင်း မင်းရဲ့မှာကြားမှု!
NOW က ORDER!
1 499.95 တစ်ခုချင်းစီ MyCommerce.com တွင်ယခု ၀ ယ်ပါ
FastSpring.com တွင်ယခု ၀ ယ်ပါ
2 -9379.95 တစ်ခုချင်းစီ
10 - 24 289.95 တစ်ခုချင်းစီ
25 - 49 239.95 တစ်ခုချင်းစီ
50 - 99 169.95 တစ်ခုချင်းစီ
100 - 199 119.95 တစ်ခုချင်းစီ
200 - 499 99.95 တစ်ခုချင်းစီ
500 + 69.95 တစ်ခုချင်းစီ
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ရောင်းချသူ MyCommerce သည်ဒီဂျစ်တယ်မြစ်၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပြီး ၂၄x ၇ ရှိသည့်ဖုန်းအမှာစာများကိုလက်ခံသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးထုတ်ကုန်နာမည်ဖော်ပြပါ DataNumen SQL Recovery နှင့်ထုတ်ကုန် ID 300586034 သူတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါ။
ဖောက်သည်စင်တာ သေဆုံးသူ - အခမဲ့နံပါတ် ထောက်ပံ့သောဘာသာစကား (များ)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု + 1-800-406-4966 အဂၤလိပ္
ဥရောပ + 49 221 31088-30 ဂျာမန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊
မည်သည့်အမှာစာမေးမြန်းမှု၊ ကြီးမားသောအမှာစာများ၊ ဝယ်ယူမှုအမိန့်များသို့မဟုတ်အခြားအထူးအမှာစာတောင်းဆိုမှုများအတွက်သင်စာရေးနိုင်သည် DataNumen အရောင်းဌာန sales@datanumen.com.
ကနေအမှာစာ DataNumen သင့်အနားမှာပြန်လည်ရောင်းချသူသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးသူ
ကျေးဇူးပြုပြီးစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်ရောင်းချသူ / ဖြန့်ဖြူးစာရင်း သင်တစ် ဦး ထံမှမှာယူချင်တယ်ဆိုရင် DataNumen သင့်အနားမှာပြန်လည်ရောင်းချသူသို့မဟုတ်ဖြန့်ဖြူးသူ။
DataNumen SQL Recovery အမိန့်
DataNumen Access Repair ၁.၂ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် ၂၀၀၄ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Drive Recovery ၁.၂ ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက် ၂၀၀၄ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Exchange Recovery 8.5 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်